Accepted the Bias Local Media but condemning the TRUTHFUL International Media | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« General Aung San. “Facist system”
Demanding to de-registered the RNDP Racist Rakhine Party »
“တကမ္ဘာလုံးက သတင်းဌာနတွေ အကုန်မှားပြီး ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေလောက်ပဲ မှန်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျရဲ့လား ။ တကမ္ဘာလုံး မှားနေတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ (မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကပါ) ဘာအညှိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေ၇တာလဲ။ ကြားနေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ၊ ကုလသမ္မဂ္ဂက ကိုယ်စားလှယ်တွေ သာမက အယ်လ်ခိုင်းဒါကို ချေမှုန်းလေ့၇ှိတဲ့ အမေရိကန်ကပါ ဒီကိစ္စကျမှ ဟိုဘက်ကို တခြားဘက်ကို ဘက်လိုက်နေကြတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်သလား? OIC ကို ဆန့်ကျင်တာက ထားပါတော့။ ကင်တားနားက အစ ဆန့်ကျင်ရလောက်အောင် အမှန်တကယ် ဘက်လိုက်နေကြပြီလား။ OIC ကို လက်မခံတာက ထားတော့။ ဘာလို့ ကုလသမ္မဂ္ဂ ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ကို အဝင် မခံရဲရတာလဲ။
ဟိုလူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားသာ ဆိုရင် ဘာလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ျက သူတို့ကို ပြန်မောင်းထုတ်ရတာလဲ။ သူတို့မှာ ဟိုဘက်နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားသာ ရှိရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္ အစိုးရက ပြန်လက်မခံရင် ကမ္ဘာကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဝိုင်းပြောမယ့် အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအတိုက်အခံတွေကပါ သူတို့ အစိုးရကို အပြစ်တင်မယ်ထင်တယ်။ အခု ဘာကြောင့် အပြစ်မတင်ကြတာလဲ။
ဆောင်းပါး ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၁၂
ကျနော် မေးချင်တာက [ဘင်္ဂါလီတွေဆိုတာ တယောက်မှ မကောင်းဘူးလို့ ပြောရင် ဘာလို့ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် မနေဘဲ ဘင်္ဂါလီတွေ လက်အောက် သွားနေသလဲ? ဘင်္ဂါလီတွေကို မုန်းတယ် ဆိုတာမှာ ဗိုက်ပူနံကား နင်းပြား ဘင်္ဂါလီ တွေကိုမှ ရွေးပြီး မုန်းတာလား? အဲဒီ့ဗိုက်ပူနံကားတွေက လဝက ကို လာဘ်ထိုးရလောက်အောင် တကယ်ပဲ ချမ်းသာနေသလား? မလေးရှားကို သွားတာလောက်က နားလည်လို့ရတယ်။ မွတ်စလင်ပေမဲ့ ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ဘူးလေ။
သူတို့လို မုန်းတီးနေသူတွေ ဘင်္ဂါလီ လက်အောက် သွားနေတာက နည်းနည်းတော့ ဟာသဆန် မနေဘူးလား?]
စောမြရာဇာလင်း —– ကျွန်မအမျိုးသားရဲ့ ညီမလေးကတော့ အစိုးရပိုင်းမှာ အမတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ အမျိုးသားကတော့ အစိုးရ ဝန်ထမ်း မဟုတ်ပေမယ့်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ရခိုင်တွေ အပါအဝင် တခြား ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ကျန်းမာချမ်းသာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်က လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အချိန်ပြည့် ကြိုးစားနေကြတာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်မနဲပ သူဟာ ဒီကိုမလာခင်လည်းပဲ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှ အခု နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ ထင်နေကြတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ လုံးဝ မမှန်ကန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ရှင်းပြသလို တချို့က ရခိုင်တွေက မတရားလုပ်တယ် ဆိုပြီးတော့ အထင်လွဲမှုတွေ ရှိတယ် ဆိုတာလဲ တင်ပြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အစိုးရကလည်း အစွန်းရောက်တွေကို အင်မတန်မှ ကြောက်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကတော့ ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် မတရားသဖြင့် နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။မတရားပြောလာတာတွေ ရှိလာတော့ ကျွန်မတို့ကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်းပြရတာ ရှိပါတယ်။ သူတို့လည်း နားလည်ပါတယ်။
[ဒါဆိုရင် ကျနော်ထုတ်ချင်တဲ့ မေးခွန်း နံပါတ်က…. လူတွေ ပြောပြောနေတာက ဘင်္ဂါလီတွေက ဘာသာရေး ဘက်လိုက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတောင် သူတို့ဆီမှာ မွေးလာခဲ့၊ နေလာခဲ့လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံသေးတာ….ဘာကြောင့် ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို ကျမှ ဘာသာတူရဲ့သားနဲ့တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လက်မခံရတာလဲ။
သူတို့ဆီမှာ မွေးလာတာ မဟုတ်လို့လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ အပြန်အလှန် သတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက အဲဒီ့ဒေသမှာ နေလာတဲ့ မွတ်စလင်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာက ထင်ရှားပါတယ်။
ဒီတော့ နယ်မြေကိုပဲ ယူပြီး လူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံဘဲ ထားတာက တရားမျှတတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
အဲလို မြန်မာနိုင်ငံက လက်မခံဘဲ ထားရင် ဟိုဘက်ကလည်း လက်မခံတဲ့ အတွက် ကလေးငယ်တယောက်ဟာ မွေးလာကတည်းက illegal ဖြစ်တော့မယ်။ တရားမဝင် ဖြစ်တော့မယ်။ မွေးလာခြင်းကိုက ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်တော့မယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက လုပ်သလိုမျိုး၊ ဘာသာကို မကြည့်ဘဲ အစဉ်အဆက် နေလာခဲ့ခြင်း နေမလာခဲ့ခြင်းကို ကြည့်သလိုမျိုး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံနည်းတူ မလုပ်သင့်ဘူးလား။
အဲလို ဘာသာကို မကြည့်ပဲ (တကယ်အစဉ်အဆက် နေလာခဲ့သူတွေကို) နိုင်ငံသားပေးတာကမှ ဘာသာရေးဘက်လိုက်မှု ကင်းတာပါ။
နောက်တခုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ဘာသာရေးအရ အစွန်းရောက်လွန်းတယ်၊ ဘက်လိုက်တယ်လို့ တချို့က ပြောကြပေမယ့် (((ညီမလေးကတော့ အစိုးရပိုင်းမှာ အမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ အမျိုးသားကတော့ အစိုးရ ဝန်ထမ်း မဟုတ်ပေမယ့်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ဘောင်ထဲကနေပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ ရခိုင်တွေ အပါအဝင် တခြား ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ကျန်းမာချမ်းသာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်က လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အချိန်ပြည့် ကြိုးစားနေကြတာ ရှိပါတယ်။))) ဆိုတော့ကာ
သူတို့ကို ဟိုမှာ အမတ်ဖြစ်ခွင့် ဘာလို့ ပေးရသလဲ။ (ဒီနေရာမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ကောင်းလှပြီလို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံတည်း ယှဉ်ကြည့်ရုံ သက်သက်ပါ။)
ဘာလို့ သူတို့ကျတော့ ဟိုမှာ လူ့အခွင့်အရေးစကား ပြောခွင့်ရှိပြီး ဟိုလူတွေကျတော့ ဒီမှာ လူ့အခွင့်အရေးစကား ပြောခွင့် မရှိရတာလဲ။]
စောမြရာဇာလင်း —- အဲဒီကလူတွေက ကျွန်မတို့ဆိုရင်လဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လူတွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင်ပဲ။ ကျွန်မတို့လည်း လေးစားတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက လုံခြုံရေးအတွက် အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။
ပုလိပ်တွေ ဆိုရင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။
လူထုကို အရမ်းအကာအကွယ် လုပ်ပေးတယ်။
ဒီလောက်လူဦးရေများတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လူထုကို အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။
အခုကတော့ ကျွန်မတိုို့ကို နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ကြမယ်၊ ဆွေးနွေးကြမယ်၊ တိုင်ပင်ကြမယ် ဆိုပြီးတော့မှ ခေါ်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်း အပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့် လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားနေတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ ကျွန်မတို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရလာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနေအထားတွေကို အကုန်လုံး အစိုးရနဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ ဆွေးနွေးရမယ့် အနေအထားတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ကျနော် ဆက်ပြီး ပြောချင်တာတွေက ….ဒီမေးခွန်းတွေ ဖြေထားတုန်းက အဲဒီ့ အချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေက ဘင်္ဂါလီ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အကြမ်းဖက်မှု မကျူးလွန်သေးတဲ့ အချိန်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက အေးအေးဆေးဆေးပဲလို့ ပြောသွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ချင်တာက အစိုးရတွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြုမူပုံပါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ မဖြစ်ခင် အချိန်မှာ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း ကိုယ်တိုင် ဖြေထားတာက “ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက လုံခြုံရေးအတွက် အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ ပုလိပ်တွေ ဆိုရင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။ လူထုကို အရမ်းအကာအကွယ် လုပ်ပေးတယ်။ ဒီလောက်လူဦးရေများတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လူထုကို အရမ်းဂရုစိုက်တယ်။” ဆိုတာပါပဲ။
နောက်ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်တွေက ဘင်္ဂါလီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာဆိုရင်… ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက နိုဗယ်ဆုရှင် Muhammad Yunus က မွတ်စလင်။ (ဒီနေရာမှာ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ထည့်ရေးတာက ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူခြင်း မတူခြင်းက လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စကို ထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာ အဓိက မကျဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာဝင်ဖြစ်မှ လူ့အခွင့်အရေး ရထိုက်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ထောက်ပြချင်တာပါ။)
Muhammad Yunus က မွတ်စလင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဘက်က ရပ်တည်ပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် အမျိုးသမီးလည်း ထိုနည်းတူစွာပဲ။ အဲဒီ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တယ်။
ပျက်သွားတဲ့ ဘုရားတွေအတွက်လည်း ပြန်ပြင်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို ဂရုစိုက်တယ်။ အကူအညီတွေကိုပေးတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမှာ တာဝန်အရှိဆုံး သူတွေကို အရေးယူ ဖြေရှင်းမယ်လို့ ဆိုတယ်။
လူအချင်းချင်း လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဆိုတာ ရှုတ်ချထိုက်ပေမဲ့ လုံးဝမလိုလားအပ်ပေမဲ့ လူတွေကြားမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ ပိုပြီး ဝေဖန်တယ် ဆိုတာက
မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရကပါ နှိပ်ကွပ်သူထဲမှာ ပါတာရယ်၊
ဖြစ်ခါစမှာ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေ၊
နိုင်ငံတကာ ကော်မရှင်တွေကို ပေးမဝင်ရဲ တာတွေရယ်ကြောင့်ပါ။
OIC ကို ပေးဝင်ဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
ကြားနေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကုလသမ္မဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုပါ ပေးမဝင်ရဲတာတွေ ကြောင့်ပါ။
ထိုနည်းတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာကျတော့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေက လူနည်းစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ
မြန်မာပြည်မှာကျတော့ မုန်းတီးရေး သွေးထိုးနေတာတွေ၊
ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက တဘက်ရဲ့ ပုံတွေသတင်းတွေကို လုံးဝ မဖော်ပြပဲ အလွန်အမင်း ဘက်လိုက်တာတွေကြောင့်ပါ။
ဒီနေရာမှာ တခုရှိတာက ရခိုင်တွေကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းမယ့် သူတွေကိုလည်း လုံးဝမနှစ်မြို့ပါ။ အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ Anti-Rakhine တွေကိုရော Anti-Rohingya တွေကိုပါ ကျနော် မလိုလားပါ။
နှစ်ဘက်စလုံးမှာ လူဆိုးတွေ အစွန်းရောက်တွေ ရှိသလို အပြစ်ကင်းသူ လူကောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အကုန်သိမ်းကြုံးပြောခြင်းက အမြင်ကျယ်သူ၊ မျှတသူ၊ ဘက်မလိုက်သူတွေကိုပါ စော်ကားသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ မြန်မာ တချို့ မကောင်းရုံနဲ့ လူမျိုးအလိုက် စော်ကား တံဆိပ်ကပ်တာဟာလဲ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းပါပဲ။
နောက်တခုက ကျနော် ဖတ်မိတဲ့ post တခု ရှိတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေချည်း ဆိုရင် ရခိုင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ တည့်နေမှာပဲ ဆိုတဲ့ပို့စ်ပါ။ အဲဒါကို ကျနော် လက်မခံပါဘူး။ လူတွေပြောနေကြသလို ဘာသာရေး ကိစ္စ သက်သက် ဆိုတာကလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာသာရေး ခွဲခြားမှု ပါတယ် ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့ထက် ပိုပြင်းပါတယ်။
ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲတာတွေပါ ပါပါတယ်။
ပထမဆုံး စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒီအင်တာဗျူးအရဆိုရင် မွတ်စလင်တွေကို အပြင်းအထန် မုန်းလွန်းတယ် ဆိုရင် ဘင်္ဂါလီတွေကို အပြင်းအထန် မုန်းတယ်ဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ သွားနေကြမှာ မဟုတ်ပါ။
အခုတော့ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ ကိုယ့်ထက် power ကြီးသလို ဖြစ်နေတဲ့ ဟိုဘက်က အာဏာပိုင်တွေ၊ သူဌေးတွေနဲ့ကျတော့ တည့်ပြီး၊ အတူတူ သွားနေနေပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျမှ ရွေးမုန်းသလို ဖြစ်နေတယ်။
နောက်တခုက လူမျိုးခွဲတာ၊ အသားအရောင် ခွဲတယ်ဆိုတာကလည်း တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ (ဘာသာတူပေမဲ့)ခုချိန်ထိ ရှိနေဆဲ ကိစ္စပါ။ ဒီတော့ ဘာသာရေးသက်သက်တင် မဟုတ်ပါ။
ဆဲတာကိုပဲ ကြည့်ပါ။ စောက်မွတ်စလင် လို့ ဆဲတဲ့သူထက် စောက်ကုလားလို့ ဆဲမယ့်သူက ပိုများပါတယ်။ (တကယ်ကတော့လူမျိုးအရရော ဘာသာအရပါ သိမ်းကြုံးပြီး မဆဲသင့်ပါ)
ကုလားတွေ အကုန်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားဦးတော့ အမြင်ကျဉ်းကြရင် လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမှု အနေနဲ့ ပြဿနာတွေက ဆက်ရှိနေမှာပါ။
ဘာသာတူလာလို့ မုန်းသူအရေအတွက် နည်းနည်းလျော့သွားရင်တောင် ခွဲခြားမှုကတော့ ဆက်ရှိမှာပါ။
အဲဒါကို သိသာစေဖို့ ပန်းသေးတရုတ်(မွတ်စလင်) အသားဖြူဖြူ တယောက်နဲ့ ဟိန္ဒူကုလားအသားမည်းမည်း တယောက်ကိုပဲ ယှဉ်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
မခင်သေးတဲ့ တရုတ်ပန်းသေး မွတ်စလင်နဲ့ မခင်သေးတဲ့ ဟိန္ဒူကုလားတယောက်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ အများစုက (အကုန်လုံးတော့ မဟုတ်ပါ) ပန်းသေးတရုတ်ကို မွတ်စလင်ဖြစ်ပေမယ့် ဟိန္ဒူအသားမည်း ကုလားထက် ပိုပြီး လက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။
အသားမည်းမည်း မွတ်စလင်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး လက်မခံကြတဲ့သူ များပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာသာရေး သက်သက်ထက် ပိုပြင်းပါတယ်။
“နောက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း ပြောရတာ အက်ကြောင်းထပ်နေပြီ။ ဦးမျိုးကျော် ဆိုတဲ့သူပြောလို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ရေးတာပါဆိုရင် သူပြောသလောက်ပဲ ရေးတော့မှာလား။ နောက်ဆုံးပိတ် တခြား observation မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဦးမျိုးကျော်ကိုတော့ မေးခွန်းပြန်ထုတ်သင့်တာပေါ့။ ဥပမာ… ရေးထားတာက“မိမိတို့ နေအိမ်ကို မိမိ ကိုယ်တိုင် စတင် မီးရှို့ခြင်း အပြင် ရခိုင်လူမျိုးများ၏ နေအိမ် များကိုပါ စတင် မီးရှို့ ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိ ရပြီး ယင်းဖြစ်စဉ် များကို ကြည့်လျှင် ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပွား လာရခြင်း မှာ ပြည်ပ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်း များ၏ ပယောဂ ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း” လို့ ရေးထားတော့ သူက ပြောလာရင် ပြန်မေးလို့ ရတာတွေက …
ရခိုင်တွေအိမ်ကိုပါ မီးလောင်အောင်လို့ သူတို့က ရှို့တာလား (ဒါဆိုရင်တော့ လူမျိုးနှစ်မျိုးလုံး ရောနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်မျိုးမှာမှ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်။
ရခိုင်သက်သက် မွတ်စလင်တွေသက်သက် နေတဲ့ ရပ်ကွက်မျိုးဆိုရင် ရှို့ရင် ရှို့တဲ့သူရဲ့ရပ်ကွက်ပဲ မီးလောင်မှာပေါ့။ သူတို့အိမ် သူတို့ ရှို့တယ်ဆိုတာကို ဦးမျှိုးကျော်က သူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်၇တာလား။ ဘယ်သူက ပြောတာလဲ။ တယောက်ယောက်က တကယ် မျက်မြင် တွေ့လိုက်တာလား။ တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ပါးစပ်သတင်းလား။…အိမ်မီးလောင်သွားတဲ့ မွတ်စလင်တွေကရော ဘာပြန်ပြောလဲ? အဲဒါမျိုးတွေကို သေချာမေးဖို့နဲ့observation လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်)”
တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူ စီးပွါးရေးသမား အနည်းငယ်တော့ ၇ှိလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့သာ့ ဒီမှာမွေးလာပြီး ဘိုးဘွားတွေ လက်ထက်က နိုင်ငံသားရပြီးမှ ခုမှ ပြန်နှင်ထုတ်ခံရတာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဥပမာ ပေးရရင် …ကိုယ့်မျိုးဆက်မှာ စင်ကာပူဖြစ်ဖြစ် အနောက်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် သွားအခြေချပြီးခါမှ နောက်မျိုးဆက် ကိုယ့် မြေးမြစ်တွေကျမှ အဲဒီ့နိုင်ငံအစိုးရတွေက ကိုယ့် next generation တွေကို နိုင်ငံသား အဖြစ်ကနေ ပြန်ရုပ်သိမ်းရင် သူတို့ ဘယ်နိုင်ငံမှာ သွားနေရမလဲ?
ဘယ်နိုင်ငံက လက်ခံမှာလဲ?ကိုယ် အဲ့လိုလူ ဖြစ်ရင်ရော ကိုယ့် မြေးမြစ်တွေ အတွက် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ?အဲလိုလူတွေကို ကျူးကျော်သူလို့ ခေါ်ရင် သူတို့ဟာ မွေးရာပါ ကျူးကျော်သူတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မွေးလာခြင်းကိုက ကျူးကျော်မှု၊ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တဘက်မှာ သူတို့ထဲကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားလူမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်လာရင်တော့ အရေးယူအပြစ်ပေးရမှာ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ (အကြမ်းဖက်သူကိုပဲ) နှိမ်နင်းရမှာက တပိုင်းပါ။
Tags: Ekmeleddin İhsanoğlu, European Union, Government, Islam, Multilateral, Organisation of Islamic Cooperation, Organization of Islamic Conference, United Nations
This entry was posted on December 27, 2012 at 9:18 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.